Waa maxay Giuliano Stroe, "jimicsiga jirka ugu da 'yar adduunka" waxay u eg tahay maanta? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale Waa maxay Giuliano Stroe, "jimicsiga jirka ugu da 'yar adduunka" waxay u eg tahay maanta?
Waa maxay Giuliano Stroe, "jimicsiga jirka ugu da 'yar adduunka" waxay u eg tahay maanta?
2009, magaca Giuliano Stroe oo ka yimid Roomaaniya wuxuu ahaa adduunka. Marka da'da sanadka 5, wiilka ayaa lagu soo galay buugga Guinness diiwaanka caalamka ee loogu talagalay isku-xidhka iyo awoodda.
Ku dhaji by Giuliano Stroe (@giulianostr0e) on Mar 29, 2015 at 7: 24am PDT
Giuliano ayaa dhigay rikoorka u socda inuu gacmihiisa ku socdo isagoo kubada u dhexeysa lugaha. Dhaqdhaqaaqa yar ee buuggan yar wuxuu sameeyey fannaankan horudhacsan daawadayaasha TV-ga Talyaaniga iyo maalinta xigta ee uu caanka ku ahaa!
Sannad ka dib, Stroe wuxuu rikoodhka adduunka ku qeexay tirada ugu badan ee bambooyin ee shahaadada 90 (cagihiisa ma taabto dhulka).
Labo sanno jir, Giuliano wuxuu bilaabay tababar uu la leeyahay aabihiis, waa nin hore tababare jimicsi.
Ku dhaji by Giuliano Stroe (@giulianostr0e) on Apr 4, 2015 at 1: 12am PDT
Maanta, cayaaraha dhalinyarada waa 14 sano. Wuxuu ku noolyahay qoyskiisa.
Giuliano wuxuu leeyahay walaal kale, Claudio, oo sidoo kale ku riyoonaya inuu noqdo jirka jirka.
Qaar ka mid ah waxay u malaynayaan in wiilasha laga saaray caruurnimada caadiga ah, laakiin tani ma aha kiiska. Sida carruurta kale, waxay wakhti badan ku bixiyeen banaanka, daawashada sawirrada iyo iyagoo la ciyaaraya asxaabtooda.
Maanta, Giuliano iyo Claudio waxay diirada saaraan baashaalka waxayna ka qeyb qaataan tartamada kala duwan.
Waxaan horay uga wada hadalnay Richard Sandrak oo loo yaqaan 'Little Hercules' oo ah muruqiisa iyo guusha uu ku gaaray bodybuilding.
Soo dir Ricah Sandrak (@richardsandrak) on Aug 6, 2013 at 7: 08pm PDT
Ma xusuusataa Giuliano? Waad ogtahay in ay isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay? Fikradaada kula wadaag faallooyinka!
Actress ayaa qirtay in uu kufsaday fadeexad waxbarasho
MINFI: in ka badan lacagta hawlgabka 1800 waxay ka faa'iideysaneysaa laba sano oo macnaheedu yahay